मेरो जीवन एउटा खुल्ला किताव हो
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको भिडमा गीतकार एवं संगीतकार महेश ज्ञवाली स्थापित नाम हो । सांगीतिक आकाशमा अहिले नयाँ तथा पुराना गायक गायिकाको रोजाइमा पर्दछन उनी । २०४९ सालबाट सांगीतिक यात्रामा लागेका ज्ञवालीसँग अखबारनेपाल डटकमका लागि गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंशः
– महेश जी तपाईको जीवनी र सांगीतिक यात्रा बारे केही बताइदिनुहोस न ।
मेरो जन्म भैरहवामा भएको हो । मेरो बाल्यकाल र पढाई लेखाई चाहि काठमाडौंमा नै भयो र सांगीतिक क्षेत्रमा चाहि कसरी आएँ भने २०४९ सालबाट मेरो सांगीतिक यात्रा औपचारिक रुपमा सुरु भयो त्यसभन्दा अगाडि पनि गीतहरु गाउने गर्दथे औपचारिकता भने पाएको थिइन । २०४९ सालमा ‘मोती साँझ’ भन्ने एउटा कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरुसँग गीत गाउने मौका पाएँ त्यति बेला मैले नारायण गोपालको गीत र अन्य हिन्दी गीतहरु गाएर मेरो सांगीतिक करियर सुरु भयो ।
– तपाईको बिचारमा संगीत के हो जस्तो लाग्छ ?
मेरो बिचारमा संगीत एउटा पूजा हो । तर धेरै जनाले भने संगीतलाई सौखको रुपमा लिन्छन्, संगीतलाई सौख बनाउने हैन जस्तो लाग्छ मलाई । संगीतलाई पूजा गर्नुपर्छ र पूजा गर्यो भने सरस्वतीको बास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र समय अनुसार पनि चल्ने गर्नुपर्छ । मेरो लागि त संगीत जीवनै हो र समग्रमा भन्नुपर्दा अनुशासनलाई बाँध्ने सुत्र भनेको संगीत नै हो ।
– संगीतमा सबैभन्दा सजिलो बिधा के लाग्छ यहाँलाई ?
अब संगीत आफैमा सजिलो बिधा भन्ने कुरा हुँदैन जे कुरालाई सजिलै रुपले लियो भने त सजिलै हुन्छन् हैन यसलाई गहन रुपले लिएर मनन गरी अगाडि बढ्यो भने बल्ल आपूmले चाहेको जस्तो क्वालिटी निकाल्न सक्छौ संगीत गर्दा सन्देशमुलक होस र क्वालिटी होस भन्ने चाहाना हुन्छ । संगीत विधा आफैमा सजिलो त छैन निरन्तरता विश्वासले अगाडि बढियो भने सफलता संगीत जस्तै जे काममा पनि पाउँछौ नि ।
– संगीत पेसामा लागेर कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पेसा भन्दा पनि यस क्षेत्रमा लागेको दुई दशक भयो संगीतबाटै मान सम्मान जीवन यापन चलेको छ सन्तुष्ट त हुन परि हाल्यो मेरो व्यस्तता त एक दुई वर्ष जति भयो किनभने मैले आप्mनै लागि मात्र गर्ने काम नभएको हुनाले पनि सन्तुष्ट छु । भोली गएर अरु केही गर्नु भन्ने छैन केही ग¥यो भने संगीतमा नै छ संगीतमा राम्रो गर्नेलाई राम्रै छ त्यसैले म संगीत पेसाबाट अत्यन्तै सन्तुष्ट छु ।
– अहिलेसम्मको तपाईको अनुभवमा स्थापित गायक गायिका र अहिलेको नयाँ गायक गायिकाहरुसँग पनि काम गरिसक्नुभएको छ यसबीचमा तपाईले के के कुरामा फरक पाउनुभयो ?
मेरो अनुभवले के भन्छ भने नयाँ गायक गायिकाहरु धेरै नै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ । मैले प्रायजसो नयाँ गायक गायिकाहरुसँग काम गरेको छु । अहिलेको अवस्थामा नयाँ प्रतिभाहरु संगीत सिकेर यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ र व्याकप सहित प्रवेश गरेका हुन्छन् । कतिपयले चाहि संगीत नसिकि आएको पनि पाइन्छ त्यस्ता खालकाहरुले चाहि बजारमा हल्ला फैलाउने काम मात्र गरेको पाइन्छ स्थापित गायक गायिकाहरुले चाहि समयको पालना गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ फरक यति मात्र हो ।
– नयाँ गायक गायिकहरुलाई तपाईको तर्फबाट अपडेट हुन के सुझाव दिनुहुन्छ ?
सबैभन्दा त आपूmप्रति विश्वास हुनुपर्यो मैले केही गर्न सक्छु भन्ने आपूmमा खुबी हुनु पर्यो । केही गर्न जागरुक हुनेहरुलाई दुई पाइला अघि बढ भन्यो भने बढिहाल्छ । हैन भने सुतेको अभिनय गरेर बस्नेलाई चाहि उठाउन गाह्रो नै हुन्छ । संगीत प्रति लगाव छ भने मेरो तर्फबाट सक्ने जति सहयोग गर्न तयार छु ।
– तपाईको विचारमा जीवन के हो जस्तो लाग्छ ?
मेरो विचारमा त जीवन संगीत नै हो । संगीत बिनाको जीवन अपुरो र अधुरो छ ।
– तपाई कस्तो स्वभावको व्यक्ति हो ?
म चाहि एउटा देख्दामा रुखो र खस्रो स्वभावको देखिन्छु । दिलको हिसावमा कुरा गर्नुपर्दा म एउटा खुल्ला किताव नै हुँ ।
– अन्त्यमा केही छुटेका कुरा भन्न चाहानुहुन्छ कि ?
मेरो अहिले केही गीतहरु रेकर्डिङको क्रममा छन् । हाल चाहि मेरो आइटम गीत ‘बबाल छ’ रिलिजको क्रममा छ जसलाई सना महर्जनले गाएका छन् । मेरै संगीतमा ईन्दिरा जोशीको ‘मोहनी’ भन्ने गीतमा जापानीज गायक साईटाटाईफोनाको आवाजमा तयारी अवस्थामा छ जसमा डा. बलराम गौतमको शब्द रहेको छ । अर्को गीत भने भिडियो सहित रिलिज हुने क्रममा छ ‘पुर्णेको जुन’ बोलको गीतमा गायक उदेश श्रेष्ठ र इन्दिरा जोशीको आवाजमा तयार भएको छ । त्यसैगरी नेपाली कथानक चलचित्र ‘व्याक टु व्याक’को काम पनि गरिरहेको छु । पछिल्लो समयमा म रेबल क्रियशनमा कार्यरत छु र यहिबाट नै मेरो ड्रिम प्रोजेक्टहरु आउने क्रममा छ । जसमा मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । विशेष गरी एरेन्जर बाबु प्रधान, किरण तुलाधर, विशाल पौडेल, गगन प्रधान अनि सम्पूर्ण गायक गायिकाहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु जसले अहिलेसम्म मलाई प्रमोटको लागि साथ दिईरहनुभएको छ । साथै अखबारनेपाल डटकम परिवारलाई मेरो विचार व्यक्त गर्न दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
प्रस्तुती : महेश कुमार सुनुवार